Maxkamadda oo sii deysay wariye dembi lagu waayay | Keydmedia
Maxkamadda oo sii deysay wariye dembi lagu waayay
Dowladda Soomaaliya ayaa wariyaha 22 bishii April ku eedeysay in uu ka dambeeyay dil ka dhacay degmada Boondheere iyo falal la xiriira Al-shabaab.
Muqdisho, Soomaaliya - Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta Arbaca ah ku dhawaaqday go'aanka kama dambeysta ah ee kiiska wariye Cabdiwahaab Cabdullaahi Abuuja oo muddo 5 bil ah u xirnaa dowladda Soomaaliya.
Maxkamada ayaa sheegtay in suxufiga xorriyadiisa la siiyo, kadib markii lagu waayay fal dembiyeedkii lagu soo eedeeyay oo ahaa dil ka dhacay degmada Boondheere iyo falal la xiriira Al-shabaab.
Guddoomiyaha Maxkmadda darahada koowaad ee ciidamada qalabka sida Xasan Nuur Shuute ayaa ku dhawaaqay go'aanka, isagoona sheegay in wariyaha si deg deg ah xabsiga looga sii daayo, islamarkaana maxkamadda ku weysay kiisaskii lagu soo eedeeyay.
Dhegysiga dacwaddii loo heystay wariye Abuuja ayaa la soo gabagabeeyo saddexdii bishan, waxaana xeer ilaalinta ku guul dareysatay in ay caddeyso kiiskii lagu soo oogay wariyaha oo ahaa mid been abuur ah, sida ay qabaan uruurada Saxaafadda.
Sii deynta wariyaha ayaa waxaa saaka goob joog ka ahaa Ururada Saxaafadda SJS, FESOj iyo SOMA, kuwaas oo bixinayay lacagta qarreenadda difaacyay wariyaha.